> Resource > iPad Manager File> iPad: Maamul Files on Your iPad Well
Si loo maareeyo files on your iPad iyo sidoo kale, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad barnaamij xirfadeed si ay kuu caawiyaan. Haddii ay sidaas tahay, waxaan jeclaan lahaa in ay wadaagaan tababaraha file iPad boosaska badan - Wondershare TunesGo Retro (Windows). Iyada oo barnaamijkan, waxaad ka arki kartaa, kala iibsiga iyo tirtirto music, videos, sawiro, xiriirada iyo dheeraad ah ee aad iPad fudayd. Hadda, bal aynu eegno sida barnaamijkan waxay maamushaa iPad.
Download Tababaraha file this on iPad u leedahay in isku day ah.
Sida user Mac ah, waxaad kala soo bixi kartaa sahamisa iPad file u Mac - Wondershare TunesGo Retro (Mac) si ay u maareeyaan music, videos iyo sawiro ku saabsan iPad (files kale, sida xiriirada iyo SMS waa laga reebay). Halkan, waxaan diiradda saaraan version Windows - Wondershare TunesGo Retro.
Orod Tababaraha this file iPad on PC iyo xiriiriyaan iPad la PC
Marka hore, soo dajiyo iyo kadibna TunesGo Retro on PC. Connect aad iPad la PC via iPad ee USB cable. Ka dib markii barnaamijkan ogaadaa aad iPad, waxaa tusi doonaa iPad ee info uu furmo suuqa hoose.
Tababaraha File u iPad, music kala iibsiga, playlist iyo filimada, iwm si Lugood
Mid ka mid ah shaqada socodyada muhiimka ah ee barnaamijka waa in lagu wareejiyo music, playlists, filimada iyo ka badan si uu Lugood. Sidaas darteed, wax dhib ah maleh haddii aad lumiso maktabadda Lugood, ama aad computer cusub u hesho, barnaamijkan samayn doonaa in aad u.
Guji "iDevice Copy in Lugood"> "Start"> "Copy in Lugood" in carmalka aasaasiga ah si ay u gudbiyaan music, playlists, podcasts oo dheeraad ah si ay u Lugood. Ama, waxaad ka mid wareejin karo files warbaahinta ka mid ah uu furmo suuqa u dhigma.
Fiiro gaar ah: Photos, xiriirada iyo SMS looma oggola inay u beddeshaan Lugood leh version Windows. Haddii aad isticmaasho Mac, kuu soo gudbin karaa oo kaliya music iyo playlists in Lugood.
Tababaraha File on iPad, files kala iibsiga ee iPad in PC, iyo qeybsanaan ku xigeenka
Intaa waxaa dheer, barnaamijka kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso music, sawiro, filimada, xiriirada, podcasts, Lugood U, videos music, buugaag iyo dheeraad ah si aad u computer. Marka aad soo dhoofsadaan files kuwaas oo si aad iPad la barnaamijkan, waxa aan marna masixi doono wax ku saabsan iPad. Ka sokow, waxay u bedeli karaan audio iyo videos la qaabab leheyn in kuwa saaxiibtinimo iPad.
Fiiro gaar ah: The version Windows aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan SMS si computer, laakiin ma taageeri soo degida SMS si aad iPad.
Tababaraha File iPad: maamuli files on your iPad
Iyada oo ay caawimo, si fiican aad maamuli kartaa files iPad. Waxad abuuri kartaa albums cusub u xalliso sawiro. Waa la heli karaa si ay u sameeyaan playlists on your iPad inay kaa caawiyaan inaad hesho heeso aad doonayay. Marka aad qabtid files badan oo aan waxtar lahayn, waxaad awood u iyaga la tirtiro si lacag la'aan ah ilaa meel.
Wondershare TunesGo Retro runtii waa tababare awood file iPad ah. Sidaa daraadeed, wuxuu kaa badbaaadin karaa files on your iPad si fiican u habaysan. Hadda, download barnaamijkan in ay la kulmaan hawlihiisa salients.